Ukuguqula i jeans endala kwiifetshane zefashini: Iingcamango ze-35 - HienaLouca
Juni 24, 2018 Dianne Reeves Uyilo
Ukuthenga kuthi kunzima kunjengeyokufumana iigrafu ezigqibeleleyo. Abanye babo abaphezulu ngokwaneleyo; abanye baphantsi kakhulu. Kwaye kutheni konke esikubonayo kunqunyulwe ngokukhawuleza? Sifumene kulula kakhulu ukuthatha izinto ezandleni zethu, kuba ihlobo lifutshane kakhulu ukuba lingayisebenzisi iifutshane ezimfutshane. Yenza iibhotshi zamaphupha akho, ungaqala ngee jeans onokuyisebenzisa kunye nento oyithandayo. Mhlawumbi le jeans enomfanekiso ongazange uyithande (okuyihlazo, njengoko uMaria Kondo ayenokuthi, yonke into oyifunayo kufuneka ilinge kwaye ivelise uvuyo). Kwimeko nayiphi na into, ngokukhawuleza xa ufumana le jeans, ungaziqhayisa emfutshane. Nazi imimiselo embalwa yeerans yokujika ibe ngamafutshane.
(Iimbono ezipheleleyo: Ixesha le-1,377, ukutyelelwa kwe-6 ngosuku)
Iskimu sokugcoba "Ndiyabulela umama"
Indlela yokukhetha uhambo lokubhukuda kumntu ongeyomgangatho
I-mini-pantry yokugcina ulondolozo kunye nemasheya: Iingcamango ze-25
Izindlu zokuhlambela izindlu zokuzihlamba: ukhetho lwezithombe ezinomdla
I-7 IMAHLA EZIQHELEKILEYO E-UKRAINE
Iingcamango ze-20 zemihlaba
Kwabo badibeneyo: ukhetho lwefestile
Post Previous:Intombazana egama linguMadison Beer ibonwe kwi-suit suit yokubhukuda e-pink kwi-beach ye-Miami Beach
Okulandelayo Post:UMegan Markle wadlala umdlalo wesondo ngomlomo kwiingqungquthela zentsha! (i vidiyo)
Reality star doctor and girlfriend suspected of… (99)
Mother of LeSean McCoy’s son changes her story… (40)
Ihlobo lifikile - amantombazana ahamba ngeenxa zonke emhlabeni ... (27)
Emily Ratajkowski stuns in sheer black dress at… (22)